NLP 101 (Neuro-Linguistic Programming) • Toe Tet
သင့်ဘဝကို အသစ်တဖန် ပြန်လည်မွေးဖွားဖို့ NLP 101
NLP ဆိုတာ Neurolinguistic Programming လို့အမည်ရပြီး အလွယ်တကူရှင်းပြရရင် ဘဝနေနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးချစိတ်ပညာကို အခြေခံထားပြီး လူတွေရဲ့ဘဝအမြင်ကိုပြောင်းလဲပေးပြီး အောင်မြင်ရေးနှင့် ပျော်ရွင်ရေးအတွက် အင်မတန်အထောက်အကူပြုသည့် နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေး၊ မားကတ်တင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်များတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုနေသော ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် Dr. ဖြိုးပိုင်ပါ။ Y.E.C Learning Center ရဲ့ Founder နှင့် Principal တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနှင့် ၂၀၁၅ တွင် NLP သင်တန်းကို Bangkok တွင်စတက်ဖြစ်သည်။ အရင်က ဘဝမှာ အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့များစွာအထောက်အကူပြုသည်ကို တွေ့ရသည့်အတွက် 2016 နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် Y.E.C Learning Center မှ သင်တန်းသားများအတွက် NLP-based Seminar များ စီစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
NLP 101 သင်တန်းကတော့ ရည်ရွယ်ချင်ပျောက်နေတဲ့ သူတွေနဲ့ ရည်မှန်းချက်ရှိပြီး Motivation စိတ်ဓာတ်လှုံ့ဆော်မှုအားနည်းနေသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ Motivation နဲ့ပတ်သက်လို့ လေ့လာလာသူများ၊ လူအများနှင့် ဆက်ဆံပြောဆိုနေသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
1. Introduction to NLP 101
2.4Pillar of NLP
3.4Clouds
4. Different Techniques to relieve negative emotion
8. Swish Pattern
10. Sub-modalities (Introduction)
11. NLP Bonus Incantation
12. NLP Bonus: Sale using NLP
13. NLP Bonus: Unlock Your Potentials for Success
✔️စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ ✔️မိမိဘဝကို စိတ်ကြိုက်ပုံဖော်လိုသူများ ✔️NLP ကိုစတင်လေ့လာလိုသူများ
သင်တန်းသားများအနေဖြင့် ဘဝအတွက် အရေးကြီးသည့် ပညာရပ်များကို လူတိုင်းတက်ရောက်စေနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ Y.E.C Learning Center သည် မန္တလေးမြို့အခြေစိုက်သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်တန်းသားများဧ။်ဘဝတိုးတက်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ယခုအခါ Online မှ NLP ကို လူတိုင်းလေ့လာနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
P.S – ToeTet မှ မည်သည့်သင်တန်းကိုမဆို စိတ်တိုင်းမကျပါက တစ်ပတ်အတွင်း 100% Refund. သင်ကြာမည့် Trainer’s Profile
Business Management နှင်. Marketing ဘာသာရပ်များကို သင်တန်းသားပေါင်း 25,000 ကျော်ကို သင်ကြားပို.ချပေးခဲ.ပြီးဖြစ်ပါသည်။
NLPဆိုတာ ဘာလဲ...ဘာလဲ..နဲ့ စဥ်းစားနေခဲ့တာကြာပြီ ဆရာ့သင်တန်းလေးတက်ပြီးတော့မှ ပြုံးနိုင်တော့တယ် Thanks
NLP/ အရမ္းေကာင္းပါတယ္ ဒီထက္
I’m interesting for my new life
NLP 1 (4 Cloud NLP)
NLP2My Story
NLP3Relieve Negative Emotion
NLP4History and def
NLP5Presuppositions
NLP6Model of communication
NLP7Testimonials
NLP 8 Model and presupposition
NLP9(4 Pillors)
NLP 10 Obama nlp
NLP 11 Milton Model
NLP 12. Swish pattern
NLP 13 Submodalities
NLP Bonus Incantation
NLP Bonus: Sale using NLP
NLP Bonus: Unlock Your Potentials for Success